Abụọ Way Mirror Glass
Isi n'ọtụtụ Glass
ngwá ụlọ Glass
adịghị adị Glass
Iko dị ala
Na-enyocha Igwe Ọkụ Chemical Glass
Omenala Glass Ụgha
Ọkachamara na nhazi omimi iko na ọrụ ahaziri iche nyere maka ihe ọ bụla a chọrọ na nha, edging, mkpọpu mmiri, tempering, ibipụta na ọgwụgwọ elu.
Ihe karịrị ndị injinia nwere nka 10 nwere ahụmịhe karịa afọ 5 iji hụ na ngwaahịa gị Saida Glass na-eweta n'ọkwa dị elu yana arụmọrụ kwụsiri ike n'akụkụ ahịa.
Mezue ahịrị nhazi iko nkwụsị otu nkwụsị ya na ndị ọrụ nwere nkà, SOP a nụchara anụcha na nleba anya n'ịntanetị. Enweghị MOQ na nyocha 100% nke mbupu ọ bụla.
Ị maara ihe ink seramiiki dị elu site na mbipụta dijitalụ?
Glass bụ ihe ndabere na-adịghị etinye ya na elu dị larịị. Mgbe ị na-eji ink na-esi nri dị ala n'oge a na-ebi akwụkwọ silkscreen, ọ nwere ike ime ụfọdụ nsogbu anaghị akwụsi ike dị ka nrapanye dị ala, nkwụsị ihu igwe dị ala ma ọ bụ ink na-amalite ịpụpụ, mwepu agba na ihe ndị ọzọ. Ink seramiiki nke...
Copyright - 2010-2025: All Rights echekwabara.
Glass N'ihi Lighting Cover , Kwụpụ Glass N'ihi Lighting, Home ngwa oru n'obi Glass, cover Glass, Efere Print Cover Glass , Smart Watch Cover Glass ,